कुन–कुन नायिकाले गर्छन् देह व्यापार ?
Homemanoranjanकुन–कुन नायिकाले गर्छन् देह व्यापार ?
aparadhkhabar.com 10:40 AM
काठमाडौं । बलिउडमा अभिनेत्रीहरू देह व्यापारस“ग जोडिएका समचार हाम्रा सामुन्ने थुप्रै आइसकेका छन् । तपाई हाम्रा लागि यो समाचार नयाँ नहुन सक्छ ।
उनीहरूले देह व्यापारबाटै आफ्नो गुजारासमेत चलाउने गरेका छन् । यद्यपि केही नायिकाहरू देह व्यापारबाट बाहिर आउनै चाहँदैनन् । र व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् पनि ।
यसको सूची बलिउडमा लामो छ । यी अभिनेत्रीहरूलाई प्रहरीले देह व्यापार गर्दै गरेको अवस्थामा रङ्गेहात पक्राउ गरेर पटक पटक कारबाही गरिसकेको छ । र मुद्दासमेत चलाइसकेको छ ।
श्वेताले २००२ मा रिलिज भएको फिल्म ‘मकडी’ले राष्ट्रिय अवार्ड पाएकी थिइन् । फिल्ममा उनको राम्रो अभिनय थियो ।
प्ले ब्वाय म्यागेजिनमा न्यूड फोटो शूट गराएकी शर्लिन चोपडा दुई वर्षअगाडि आफैले गरेको ट्वीटबाट सनसनी मच्चाएकी थिइन् । शर्लिनले ट्विटरमा भनेकी थिइन्, ‘म पहिला पैसाका लागि सेक्स गर्ने गर्थे । अहिले त्यो काम गर्दिन । देह व्यापार छाडिसके ।’
तमिल फिल्मकी अभिनेत्री ऐश अंसारीलाई जोधपुर पुलिसले एस्कार्ट सर्विसमा लुकेर सेक्स रैकेट चलाएको आरोपमा पक्राउ गरिसकेको छ । नोभेम्बर २०१३ मा ऐश अंसारीलाई तीन जना पुरुषस“ग यौनसम्बन्ध गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेकी थिइन् ।
तमिल फिल्मकी लोकप्रिय अभिनेत्री भुवनेश्वरीलाई वेश्यावृत्तिको आरोपमा चेन्नई पुलिस पक्राउ गरेको थियो ।
बंगाली फिल्मकी अभिनेत्री मिष्टीलाई मुंबई पुलिसले देह व्यापारको आरोपमा पक्राउ गरेर कारबाही गरी छाडेको छ । पुलिसले छापामार्दा नायिका मिष्टी दिल्लीका एक फैशन डिजाइनर राकेश कटोरियास“ग आपत्तिजनक हालत फेलापरेकी थिइन् ।
कन्नड फिल्म अभिनेत्री यमुनालाई सन् २०११ मा बंगलौरमा सेक्स रैकेट चलाएको आरोपमा स्थानीय प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । अभिनेत्री यमुनाका ग्राहक मुंबई र दिल्ली जस्ता ठूला शहरबाट हुने गर्छन् । उनीहरू कन्नडका फाइव स्टार होटलमा जाने आउँछन् पनि । त्यसको व्यवस्था उनले मिलाउने गर्छिन् ।
तेलुगू फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो र ज्योतिको एक सेक्स रैकेटको आरोप में गिरफ्तार गरिएको थियो । हैदराबाद पुलिसले २०१० मा स्प्रिंग स्वर्ग अपार्टमेन्टमा सेक्स रैकेट चलाउँदै गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थियो ।
तेलुगू धारावाहिक ‘हिमाबिन्दु’ र ‘लाया’मा काम गरी सकेकी कलाकार श्रावणीलाई अक्टोबर २०१३ मा एक हाइप्रोफाइल सेक्स रैकेटमा मधापुरमा रंगे हाथ पक्राउ गरिएको थियो ।
दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री किन्नरालाई सेक्स कारोबारको खुलासा एक न्यूज चैनलले आफ्नो स्टिंग अप्रेशनमा गरेको थियो ।
सनी त पेशेवर देह व्यापारी हुन् । उनको बारेमा सबैलाई जानकारी छ । बलिउडमा उनी अहिले चलेकी अभिनेत्रीमा पर्छिन् । उनका नाङ्गा तस्बिर र फिल्महरू अहिले पनि इन्टरनेटमा हेर्न सकिन्छ । उनी ब्लु फिल्महरू पैसा लिएर खेल्ने गर्छिन् ।